प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदै, यस्तो छ कारण - Sutra News
प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदै, यस्तो छ कारण
नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको वडा अधिवेशन विवादकाबीच सकिएको छ । तर, जिल्लामा रहेका काँग्रेसका दुई गुटभित्रको विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। जिल्लामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कर्ण मल्ल पक्षका छुट्टाछुट्टै गुट छन् ।
डडेल्धुरामा देउवा र अर्को वर्तमान जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । देउवा र मल्लले महाधिवेशनको समयमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा भने मल्ल हाबी भएको देखिन्छ ।
मल्लले देउवालाई रोक्दै दुई कार्यकाल जिल्ला सभापतिको नेतृत्व सम्हालेका थिए । यसपटक पनि जिल्लामा मल्ल हावी हुने डरले जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशीलका लागि ५ हजार ८०४ जनाको नामावली पठाएकोमा छानविन समितिले ४ सय ४४ जनाको नाम हटाइदिएको मल्ल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।
देउवाले गृह जिल्लामा हाबी हुनका लागि आफू अनुकूलका ३ सय १२ जना थपेर प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरी वडा अधिवेशन गरेको मल्ल पक्षले बताउँदै आएको छ । देउवा पक्षले वडा अधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरि सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, यता मल्ल पक्षले भने वडा अधिवेशनलाई वैधता दिन नसक्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन : आरोप प्रत्यारोप
पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र गरिएको एकपक्षीय वडा अधिवेशन नमान्ने र पुरानै कमिटीलाई यथावत राख्ने सभापति मल्लले बताए । उनले एकलौटी रूपमा गरिएको अधिवेशनबाट आएको नेतृत्व स्वीकार्य नहुने र त्यसकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनीसमेत दिए ।
तर, यता देउवा समूहबाट सभापतिका आकांक्षी भीमबहादुर साउदले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन समितिले गरेको निर्वाचनलाई वैधता नदिएर कसलाई दिने भन्दै प्रश्न उठाए । उनले गृहजिल्लामा देउवालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको जिकिर गरे ।
'अधिकांश क्षेत्रमा वडा अधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा भएको छ । केही वडाहरूमा चुनावमार्फत नेतृत्व र प्रतिनिधि छनौट भएर आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी अवैध भन्ने? पार्टी सभापति मल्लसहित केही साथीहरू चुनावबाट डराएर रोक्ने प्रयास गरे ।’
देउवाले पार्टी सभापति लड्ने उद्घोष गरेपछि देउवालाई विवादित बनाउन पौडेल समूह जिल्लाभित्र पनि छिरिसकेको उनको संकेत थियो ।न्यूजकारखाना
प्रकाशित :भाद्र ३०, २०७८ बुधवार - १२:२४:०२
एमाले बैठक- विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने बिभिन्न तीन प्रतिवेदन पेश, तेस्रो धारका नेताको असन्तुष्टि
२२ करोड ५० लाखको आइपिओ जारी गर्दै न्यादी हाइड्रोपावर
एमालेमा लफडा- तेस्रो धारका नेताहरुले दिए बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी
पोर्न फिल्म निर्माणको लफडामा किन परिन् अभिनेत्री चोपडा ?
नारायणहिटीको श्रीपेच चोर्न खोज्ने २५ वर्षीय युवक प्रक्राउ, मानसिक अवस्था ठिक नभएको आशंका
दल विभाजन अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग